Gabar laga soo bixiyey burburka dhismaha
Mas’uuliyiinta Turkey ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii fiidnimadii Jimcaha ku dhuftay dalkaasi ay gaartay ilaa 31 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 1,600 oo kale.
Kooxaha gurmadka ayaa maanta oo Axad ah soo badbaadiyay dad ku hoos jiray burburka dhismayaasha, laba cisho ka dib markii dhul gariir cabbirkiisu ahaa 6.8 magnitude uu ku dhuftay gobolka bariga dalkaasi ku yaalla.
Telefeshinnada Turkey-ga ayaa soo bandhigayay muuqaalka Ayse Yildiz oo ah 35 jir iyo gabadheeda Yusra oo laba jir ah kuwaasi oo laga soo bixinayo burburka dhisme dabaq ah magaalada Elazing. Waxa ay burburka dhismaha hoostiisa ku xayirnaayeen muddo 28 saacadood ah.
45 qof oo nool ayaa ilaa iyo hadda laga soo bixiyey burburka dhismayaasha dumay, waxaana sidaasi warbaahinta maanta u sheegay madaxweynaha Turkey Recep Tayyip Erdogan oo ku sugan Istanbul.
Iyadoo uu heerkulka xilliga habeenkii ah hoos u dhacay uuna gaaray -5 ee darajada heerkulka ee Celsius, ayaa kooxaha gurmadku waxay sameeyeen in ka badan 9,500 oo teendhooyin ah kuwaasi oo loogu talogalay dadka ka soo barakacay guryahooda.
Kooxaha gurmadka ayaa xoogga ku saaray dadaalkooda xaafadda Mustafa Pasa iyo magaalada u dhow ee Sivrice oo ah goobaha ugu dhow ee xudunta dhulgariirkii Jimcaha.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in la sameeyay dadaal lagu doonayo in dhibaatada lagula tacaalo isaga oo ballan qaaday in hoy la siin doono dhibanayaasha.
“Turkey waxay bilowday iney uga soo kabato dhaawaca ay musiibadan weyn keentay si wadajir ah,” ayuu yiri.
Erdogan ayaa Sabtidii booqday goobaha musiibadu ka dhacday si uu u soo qiimeeyo howlaha gurmadka, wuxuuna isbitaalka ku booqday dad ku dhaawacmay dhul gariirka isaga oo sidoo kale ka qeyb galay aas loo sameeyey hooyo iyo wiilkeeda oo ka mid ah dadka ku dhintay dhulgariirka.
Sanadkii 1999-kii ayaa ahaa markii uu dalka Turkey ku dhuftay dhul-gariirkii ugu darnaa kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 18 kun oo qof.